Cinezela ukuHambisa isiXhobo sokuNgqisha China Manufacturer
Inkcazo:Umatshini wokuCoca ngeNtsimbi ngeMetali,Cinezela uMgaqo wokuNikeza ngeNtsimbi yeKhasi,Ukunyibilikisa i-coil Stamping Lines
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Cinezela ukuHambisa isiXhobo sokuNgqisha
Umzekelo No.: MAC-1300H
Cofa umgca wokuhambisa isitampu wokuhambisa isitampu unika abathengi uluhlu olupheleleyo lwezinto ezityiwayo zokondla izinto zekhoyili koomatshini bokushicilela, abagubungela phantse nayiphi na imfuneko.
Uluhlu lweemveliso luqonda ukuba uluhlu lutya luye kuma kubuninzi bezinto ezinobubanzi obuyi-1800 mm ukuya kuthi ga kubungama-6.0mm wezinto ezinobunzima beemilimitha eliqela.
Cinezela ukuTshisa isiXhobo sokuStamp siqulathe amacandelo amabini, enye yi-hydraulic decoiler ngemoto ye-coil kwaye enye i-straightener kunye ne-servo feeder part.
Cinezela ukuThintela ukuXhoboza iziTayile kulungele ngokukodwa ukulungiselela i-coil nokwenza ukuba ifumaneke koomatshini kunye nokusebenza kwemishini elandelayo kunye ilungele ukufota, ukujija, ukusika i-laser kunye nezinye iinkqubo ezininzi zemishini.
Ukuguquguquka okunokuthi kusetyenziswe kule migca kwenza ukuba kube lula ukuba kufundwe isisombululo esona sisekelo kwiimfuno ezithile zabathengi zokusebenza, kuxhomekeke kumacandelo abo kunye nokusetyenziswa kwezinto ngokwazo.
I-MAC4 Cinezela ukuPhakamisa isiXhobo sokuSebenza isebenza kumzi mveliso wabathengi bethu.
Cinezela ukuThintela ukuXineka koLayini ngokwenza umgca wokutya wephepha lomqolo.
Lo matshini usebenza esebenzela omnye umzi-mveliso wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo lwe-U ezinemigangatho yokulinganisa neyomntu ngamnye .
Umatshini wokuCoca ngeNtsimbi ngeMetali Cinezela uMgaqo wokuNikeza ngeNtsimbi yeKhasi Ukunyibilikisa i-coil Stamping Lines Umatshini wokuCoca i-Metet Uncoiling Umatshini wokuhambisa iMetal Sheet Umatshini wokuhambisa isitampu Metal Umatshini wokuhambisa umbane we Metal Punch Umatshini wokuhambisa umatshini weSinyithi weNtsimbi ngeMoto